Home Business International Page 2
By Colin Packham SYDNEY, May 12 (Reuters) - Australia's treasurer was tested for the coronavirus on Tuesday after he broke intoasustained coughing bout while givingaspeech to parliament about plans for an economic recovery from the pandemic. Josh Frydenberg's voice was hoarse as he spoke in front of...
LONDON The Bank of England kept interest rates steady December 19, saying it was too soon to gauge how much Prime Minister Boris Johnson’s election victory would lift the Brexit uncertainty that has hung over the economy. Two of the BoE’s nine policymakers voted forasecond month inarow...
Australian Dollar Awaits Job Data, Kiwi at 1-week Low as Dairy Prices Fall
The Australian dollar marked time on December 18 ahead of monthly employment data release while its New Zealand cousin suffered fromasteep drop in the prices of dairy, the country’s top export. Trading in major currencies was generally slow as investors headed into the holiday season awaiting further details...
By Brenna Hughes Neghaiwi and Simon Jessop ZURICH/LONDON, May 14 (Reuters) - When markets slumped in March as the spread of coronavirus gathered pace, wealth managers' trading volumes soared as ultra-rich clients reshuffled their portfolios. It was this market frenzy that helped Swiss banks UBS and Credit Suisse – the world's...
http://URL: https://www.nytimes.com/2020/01/20/style/prada-private-club-paris-couture-week.html The It bag may be more like an old hat these days – at least when it comes to fashion’s front row. But exclusivity is not exactly out of style; it’s just no longer symbolized by something you can swing from your arm. In 2020, partying with Prada is...
ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် လာမည့် အင်္ဂါနေ့တွင် ကြေညာသွားဖွယ် ရှိနေပြီး ၎င်း၏ အစီအမံများကိုလည်း ယနေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာသွားဖွယ်ရှိနေသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျုံးဝင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ပြင်ဆင်ထားသော ဥပဒေတွင် ဝန်ကြီချုပ်အနေဖြင့် ရောဂါတစ်ခုသည် နိုင်ငံသားများအပေါ် အသက်အန္တရာယ်ကြီးမားစွာ ကျရောက်နိုင်လျှင်၊ ရောဂါပိုးလျှင်မြန်စွာ ကူးစက်ခြင်းက စီးပွားရေးအပေါ် ကြီးမားသော ဆိုးကျိုး သက်ရောက်စေနိုင်လျှင် အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာနိုင်သည်။ ယခုပေါ်ပေါက်နေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် စီးပွားရေး ကျဆင်းနိုင်ခြေများ မြင့်မားနေသည်။ အရေးပေါ်ကာလအဖြစ် ကြေညာပါက ရောဂါပိုး ဖြစ်ပွားရာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ မြို့တော်ဝန်များအနေဖြင့် လူတွေကို အိမ်ထဲတွင် နေခိုင်းခြင်း၊ အခမ်းအနားများ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကျောင်းနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ...